के कब्जियत छैन यो छ? के तपाईं एक बच्चा मा कब्जियत बच्न सुत्केरी आमा हुन आवश्यक पर्छ?
स्वास्थ्य, स्वस्थ भोजन
कब्जियत - समस्या धेरै मान्छे, छैन जो ठूलो स्वरले भन्न। यस मामला मा कसैले विशेष मोमबत्ती, पीसा अन्य रेचक औषधि जडीबुटी किन्न rushes, तर यो समस्या को कारण निर्मूल गर्दैन। र यो गलत आहार मा सबै को पहिलो निहित। निस्सन्देह, हामी सबै तपाईं चाहनुहुन्छ र intestines समस्या ग्रस्त छैन जो खान्छ गर्ने छिमेकी र पेय को एक उदाहरण सेट गर्न चाहनुहुन्छ। तर, सबै जीव अलग हो, तर समस्या सधैं पटकमा पत्ता छैन। तर अनुचित आहार - कब्जियत को विकास गर्न surest तरिका हो। हामी कब्जियत गर्न खान के कुरा गर्नेछन् आज पूर्ण थिएनन्।
हामी आफ्नो आहार विश्लेषण
सबै को पहिलो, तपाईंले एक खाना डायरी बनाउन र ध्यानपूर्वक तपाईं दिनमा के र कति खाने विचार गर्न आवश्यक छ। तपाईं त 2-3 दिन को लागि आंत्र खाली भने गर्न सक्दैन वा laxatives प्रयोग गर्न रिसोर्ट, त्यसैले उत्पादनहरु को यो सेट सही छैन इष्टतम छ। यसलाई आफ्नो intestines राम्ररी काम गर्न hinders कि सबै विश्लेषण र हटाइ पछि, तपाईं त्यहाँ त कब्जियत थिएनन् छन् भन्ने महसुस हुनेछ। सबै को पहिलो, आंत्र आन्दोलनहरु को नियमित असर आहार फाइबर। तिनीहरूले अनाज मा, फल र तरकारी मा पाइन्छन्। सामान्यतया, शरीर प्रति दिन यी पदार्थ को 25 ग्राम आवश्यक छ। 50 ग्राम गर्न पुरानो कब्जियत आंकडा बढ्छ मा। अर्डर आहार फाइबर को कि रकम प्राप्त गर्न, तपाईं तरकारी र प्रति दिन फल को 1.5 किलो खान आवश्यक छ। तर, हामी मा जानुहोस् र समस्या समाधान नभएसम्म आहार देखि बहिष्कृत हुनुपर्ने विपरीत, तपाईं बताउन छौँ।
राम्रो पल्ट हटाउन
सेतो रोटी पीठो र मिठाई उत्पादन बनेको यो सूचीमा पहिलो स्थान। खैर, तपाईं मात्र होइन आंत्र समारोह पत्र हुनेछ यी खाद्य पदार्थ अप दिने, तर पनि कुनै पनि अतिरिक्त प्रयास बिना वजन गर्न सक्षम। हामी छ के कब्जियत छ कुरा, र हाम्रो सूची सम्म जारी हुनेछ तल।
बोसो र धनी शोरबा, सूजी र भात अनाज, र समर्थित मासु र माछा तेल-धनी - सबै कि छेउमा एउटा अनिश्चित अवधिको लागि सौतेली छ। यो फैटी मासु, तला र उबला अन्डा देखि इन्कार गर्न आवश्यक छ। मशरूम, मुला र लसुन देखि पनि इन्कार गर्छन्। कडा क्रीम उत्पादन र चकलेट सिफारिस गरिएको। म मीठो चाहनुहुन्छ? आफ्नो मित्र - सुकेको खुबानी, छाँट्दछ र मिति। पूर्ण आहार हटाइएको margarine, पशु बोसो, तोरी र सहिजन, फैटी सस गर्न आवश्यक छ। बहिष्कृत बलियो कफी र चिया, सबै मादक पेय। तर बारेमा पर्याप्त के तपाईं सक्दैन। हामी कब्जियत थिएन छ के छलफल गर्न आवश्यक छ।
जवान आमा को लागि आहार
यो एक महिला एक बच्चा जन्मिएको छ जब एक समय थियो, उचित पोषण को समस्या सबै भन्दा जोडले rises। अब यो जवान आमा मात्र छ, तर यो सही आहार बाहिर काम गर्न सक्षम छैन भने पनि उनको नवजात बच्चालाई कब्जियत र सम्बन्धित दुखाइ देखि, भोग्नेछन्। त्यसैले यो समय कब्जियत बच्न खान के बाहिर आंकडा, छ। सबै को पहिलो, हामी सबै आफ्नो आमा द्वारा खाएको, र बच्चा को शरीर मार्फत हुनेछ भनेर याद गर्नुपर्छ। आफ्नो पाचन प्रणालीले काम मा समावेश गरिएको छ। त्यसैले, तपाईं धेरै ध्यान दिएर यो व्यवहार गर्न आवश्यक छ। जन्म पछि, एक महिला लामो भोक हडताल पछि, बिस्तारै अंश वृद्धि र आहार मा नयाँ उत्पादनहरु शुरू कसरी, खान आवश्यक छ।
जन्म पछि पहिलो तीन दिनमा भोजन
हामी कब्जियत बच्न खान के व्यावहारिक सल्लाह गर्ने सार्न। यी दिन यो ठोस भोजन हटाउन राम्रो छ। शक्ति स्रोत दही छ। यो बाहेक nettles, मीठो चिया, Cranberry सिरप को एक decoction हुनेछ। तपाईं पनि यसलाई मा कटा अन्डा संग चिकन सूप समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। शरीर को तेस्रो दिन देखि बिस्तारै ठोस खाना गर्न accustom। सोही, यो प्रविधी कब्जियत भोगिरहेका सबै मानिसहरूलाई मदत गर्नेछ। तीन दिनको लागि, मा जाने , एक पिउने मोड त्यसपछि रहे-सुरु तपाईंको शक्ति प्रणाली।
अस्पताल देखि फिर्ता
यो बिन्दुमा, त्यहाँ के बच्चा एक सुत्केरी आमाले छ को विषयमा थप प्रश्न कब्जियत थिएन सामान्यतया छ। अझै पनि शासन पिउने राख्न आवश्यक छ। तपाईं एक दिन कम्तिमा एक लीटर पिउन गर्न आवश्यक छ। यो समय अनाज rations देखि धेरै राम्रो तरिकाले प्रविष्ट गर्नुहोस्। दलिया परिवर्तन र अनाज, गहुँ र कोदो। नुन बिना आवश्यक पानी जोश। दुई पटक एक दिन तपाईं पाकेका स्याउ खान सक्छ। यसलाई दुई पटक ठूलो साथै एक दिन एक तरकारी ragout हुनेछ। आलु र बन्दागोभी प्रयोग नगर्न। साथै, दुई पटक एक दिन, एक तरकारी वा फल सूप आफैलाई व्यवहार गर्छन्।
आहार गर्न विभिन्न थप्न
त्यहाँ बच्चा एक सुत्केरी आमाले छैन कब्जियत थियो निर्देशन, अस्पताल मा अझै पनि पकड। तथापि, डाक्टर reinsured छन्, र कुनै पनि मामला मा एक जवान आमा केही भ्रम होमियो कि लगभग सबै खान छैन। यो सही दृष्टिकोण छैन। कब्जियत धेरै पछि, सबै प्रतिबन्ध पहिले नै भूल कहिले गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसकारण कसरी जठरांत्रिय पर्चा को गतिविधि पुनर्स्थापना एक महिला सिकाउन धेरै राम्रो छ। यो मोडेल एउटा कारण वा अर्को लागि कब्जियत भोगे जब, कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, हामी जन्मेका बच्चा आमा को एक मोडेल शक्ति को आधार मा वर्णन जारी हुनेछ।
जब आफ्नो बच्चा एक हप्ताको छ, तपाईं अब तरल पदार्थ नै सीमित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पानी दुई लिटर एक दिन, सानो अंश सम्म पिउन सक्नुहुन्छ। मेनुमा, तरकारी stews बाहेक, सूप र porridge पटाखे कालो रोटी, चीज र उबला समुद्र माछा देखि थप्न गर्नुपर्छ। हप्ताको एक पटक तपाईं बीफ गर्न सक्नुहुन्छ। तरकारी र फलफूल मात्र सीमित छैन, तर एक राम्रो एक को आहार मा प्रविष्ट गर्नुहोस्। आहार मा पागल अखरोट बाहेक स्वागत सबै छन्। तर तपाईं सुत्केरी आमा हुन आवश्यक पर्छ सबै छ। कुनै पनि जोगिन एक बच्चा मा कब्जियत, बस आहार मा नयाँ उत्पादनहरु को लगातार समावेश, एक अनिकालबाट आहार आवश्यक छ। कम आहार दुई हप्ता डिजाइन गरिएको छ।
सीमा बिना शक्ति
तपाईंको crumbs दिन 21 गरिएका भएपछि, तपाईं नियमित आहार मा सार्न सक्नुहुन्छ। यो समयमा आफ्नो पाचन प्रणाली खाना र लाभदायी जीवाणुहरु बसोबास गर्न समय सबै प्रकारका भेटे। के खान, कब्जियत जोगिन, तपाईं पहिले नै, थाहा हुन सक्छ यो मुख्य आहार फाइबर स्रोत: फल र तरकारी, tselzernovye रोटी, उबला र धमाकेदार मासु र माछा।
त्यो समय देखि दुई दिनमा अन्डा को आहार मा शुरू गर्दै छन्, 1 पटक। चिकन प्राथमिकताको तरकारी धेरै संग, एक हप्ता 1 पटक खान सक्छ। मासु र माछा, यो हरेक अर्को दिन वैकल्पिक गर्न मनमोहक छ। धेरै ज्यादै पुलपुल्याउने आफैलाई जामुन र फल दही र प्राकृतिक पिउन उपयोगी।
नर्सिङ आमा को लागि दूध
त्यहाँ बच्चा आमाबाट कब्जियत थिएन छ कि विषय, म कि lactating महिलाहरु दूध प्रशस्त पिउन गर्नुपर्छ वृद्ध पुस्ता को शिक्षा सम्झन चाहन्छु। पहिलो नौ महिना प्रसब पछि त्यहाँ स्तनपान छ भने समयमा, त्यसको विपरीत, सबै डेयरी उत्पादन आहार देखि बहिष्कृत गर्नुपर्छ। तिनीहरूले बाछाको लागि राम्रो उपयुक्त छ, तर एक बच्चा आवश्यकता छैन, जो अत्यधिक क्याल्सियम र मांसपेशी वृद्धि हर्मोन, समावेश। साथै, गाई गरेको दूध आफ्नो बच्चा गर्न विदेशी हुन सक्छ सूक्ष्मजीवहरु र एंटीबडी समावेश गर्दछ।
बरु एउटा निष्कर्षमा को
आमा ध्यान आफ्नो आहार निगरानी गर्नुपर्छ। यो बच्चा धेरै चाँडै बढ्दै छ किनभने यो एक, पूर्ण सन्तुलित हुन कि अति महत्त्वपूर्ण छ र यो सबै पोषक गर्न आवश्यक छ। सारांशमा, के कब्जियत जोगिन, खान। ताजा तरकारी र जडीबुटी, vinaigrette र कुरकुरा अनाज को यो सलाद। कृपया, viscous छैन बाक्लो चामल र सूजी जस्तै याद गर्नुहोस्। आदर्श विकल्प दलिया र अनाज, मकै, जौ हुनेछ। तरकारी सूप, मासु व्यञ्जन र माछा पकाउन निश्चित हुनुहोस्। रेचक औषधि प्रभाव ज्ञात आहार उत्पादन समावेश। यो कच्चा तरकारी र फल, शैवाल, छाँट्दछ र खुबानी, केले, दुग्ध उत्पादन र रोटी गहुँको पीठो देखि। धेरै यस सन्दर्भमा, गाजर र बीट र कद्दू उपयोगी।
तर digestible कार्बोहाइड्रेट - यो सिर्फ वेवास्ता गर्नुपर्छ के हो। यो चीनी, केक, पेस्ट्री, चीनी सदृश पेय। र allergens हटाउनु। यो मुख्यतया एक मह र सिट्रस फल, जैविक कफी र कोका, चकलेट र समर्थित स्ट्रबेरी र raspberries, मसालेदार seasonings छ। केही खाद्य पदार्थ कारण छोराछोरीको colic, त्यसैले ठूलो संख्या मा प्याज र केले, अङ्गुर, मसालेदार तरकारी, टमाटर, तरबूज, खीरे र सिमी खान हुँदैन।
यो स्तनपान गर्दा नेभारा खान सम्भव छ?
हामी हेमोग्लोबिन कसरी बढाउन सक्छ? यो तपाईंलाई मदत गर्नेछ खाद्य पदार्थ।
Sprouted गहुँ: अनाज को प्रयोग
Guar गम र यसको लाभदायी गुण
दही उत्पादनको उपयोगिता र कितनी पनीर पाईन्छ
उचित पोषण। आफ्नो स्वास्थ्य ट्रयाक राख्छ जो एक व्यक्तिको आहार
एक दिन पानी पिउन तपाईं कत्तिको आवश्यक: आफ्नो पानी विचार!
Interdisciplinary संचार भूगोल र अन्य विज्ञान। भौतिक, रसायन, गणित, जीव, पारिस्थितिकी संग संचार भूगोल
Renault 19 - एक राम्रो प्रतिष्ठा संग एक कार
बिनै प्रसूति बिदा मा छोडेर: ठीक प्रसूति बिदा लागि आवेदन लेख्नुहोस्। आवश्यक कागजात को एक नमूना सूची
अभिनेता डोनाल्ड Sumpter: जीवनी, फोटो। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला
निकास धेरै गुना गैसकेट को प्रतिस्थापन: एक उपकरण र क्षेत्रीय सुविधाहरू
Tobolsk, पवित्र त्रिएक र यसको इतिहास को मन्दिर
चिकन र पनीर संग तरकारी सलाद छ - "Manon" कसरी खाना पकाउनु
विवरण र प्रकार: छिंडीमा "Technonikol" को waterproofing
एक बहुभुजको को परिधि कसरी पाउन?
कालोसूची आईफोन - समायोजन गर्न सिक्दै
चक्कर आना र कमजोरी सबैभन्दा संभावना कारण